हाम्रा ऋषिमुनीहरु निरोगी र लामो आयुका हुन्थे, कारण यस्तो छ | SwasthyaNews.Com Nepal's Leading Health News Portal
शुक्रबार, १६ चैत २०७४
भनिन्छ, ऋषि मुनीहरु लामो आयु बाँच्थे । जीवनभर निरोगी हुन्थे । किन होला ? किनभने उनीहरुको जीवनशैली एकदमै साधरण हुनेगथ्र्यो । सधै सक्रिय रहन्थे । सकारात्मक रहन्थे । सात्विक भोजन गर्थे । रिस-राग, ईष्या, प्रतिशोध जस्ता मानसिक विकार मनमा पैदा हुन दिदैनथे । त्यही कारण उनीहरु लामो आयु एवं निरोगी जीवन बाँच्थे ।
स्वस्थ्य हुने तीन सूत्र छ, सही आहार, सही बिचार र सही विहार ।
अर्थात खानपान, बिचार र दिनचर्या नै स्वस्थ्य जीवनको राज हो । खाना स्वास्थ्य, सुपाच्य र सन्तुलित हुनुपर्छ । हामी रोगी हुनुमा हाम्रो खानपान शैली खास जिम्मेवार छ । हामीले स्वादका लागि भुटेको, तारेको, मसलेदार, चिल्लो, पिरो खानेकुरामा जोड दियौं । थरीथरीका खानामा मिश्रण गर्‍यौ । कतिपय खानेकुरा आपसमा मिश्रण गर्दा त्यो विषाक्त हुन्छ । त्यससँगै स्वादका लागि मासु, मदिरा खान थाल्यौं । वास्तवमा यही खानपानले हो हाम्रो शरीरलाई जिर्ण बनाएको ।
खाना भनेको पोषणको स्रोत हुन् । त्यसैले शरीरलाई आवश्यक पोषणयुक्त खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ । खानेकुरा स्वस्थ्य र सन्तुलित हुनुपर्छ । साथै त्यसको मात्रा पनि उचित हुनुपर्छ ।
विहार अर्थात यात्रा । घुमफिर । यसले हाम्रो दैनिकी कसरी बित्छ भन्ने पनि दर्शाउँछ । हामी कहाँ जान्छौं, के गर्छौ भन्ने कुराले पनि हाम्रो स्वास्थ्य निर्धारण गर्छ ।
यसले हाम्रो दिनचर्याको संकेत गर्छ । हाम्रो दिनचर्या कुन किसिमको छ भन्ने कुरा स्वस्थ्य जीवनको लागि महत्वपूर्ण छ । बिहान उठ्ने, खाने, बस्ने, हिँड्ने, काम गर्ने, सुत्ने सबै तालिका नियमित, सन्तुलित हुनुपर्छ । दिनचर्यामा तालमेल मिल्नुपर्छ ।
बिहान सूर्योदयअघि उठ्नुपर्छ । त्यसपछि मलमूत्र त्याग गर्ने, व्यायाम गर्ने, नास्ता लिने, नुहाइधुवाई गर्ने, काम गर्ने, खाना खाने कुरामा तालमेल मिलाउनुपर्छ । यस्तो तालमेल मिलेमा हामी निरोगी हुन्छौं ।
बिचार अर्थात हाम्रो सोंच चिन्तन । हामी के सोच्छौं, कसरी सोच्छौं भन्ने कुराले हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि प्रभाव पार्छ ।
जब मनमा विकार पैदा हुन्छ, हामी रोगी हुन्छौं । शरीर विषाक्त हुन्छ । त्यसैले मन चंगा हुनुपर्छ । सकारात्मक हुनुपर्छ भनिएको हो ।
मनभित्र घृणा, ईष्र्या, अहंकार, प्रतिसोध, रिस, लोभ, पाप जस्ता कुरालाई आश्रय दिन्छौं, हाम्रो शरीर नै बोझिलो हुन्छ । यस्ता कुराले मनमा बिकार पैदा गर्छ । त्यही बिकारले शरीरमा रोगलाई जन्म दिन्छ ।
रिसाह, अहंकारी, प्रतिसोधका भावना भएका व्यक्तिहरु उच्च रक्तचाप लगायतको रोगको शिकार हुन्छन् ।
त्यसैले सकारात्मक रहनुपर्छ । विनयी रहनुपर्छ । खुसी हुनुपर्छ । उत्साहित हुनुपर्छ । यस्ता विचार, चिन्तनले हामीलाई स्वस्थ्य र फूर्तिलो बनाउँछ ।
ऋषिमुनीहरुको दैनिकी र खानपान कस्तो हुन्थ्यो ?
१. ऋषिमुनीहरु कन्दमुल सेवन गर्थे । कन्दमुलले शरीरलाई आवश्यक शक्ति प्रदान गर्छ । अत्याधिक क्यालोरी र फ्याटबाट बचाउँछ ।
२. ऋषिमुनीहरु मुलालगायत जरायुक्त खानेकुरा सेवन गर्थे, जसले शरीरलाई आवश्यक पोषण दिन्छ । यसले रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढाउँछ ।
३. ऋषिमुनीहरु ताजा फलफूल सेवन गर्थे । फलफूलमा अधिक फाइबर हुन्छ । यसले पाचन यन्त्रलाई चुस्त एवं तन्दुरुस्त राख्छ ।
४. ऋषिमुनीहरुले आफ्नो खानामा औषधिय गुणका परिकार सामेल गर्थे । यस्ता खान्कीले उनीहरुको सौन्दर्य कायम राख्न, रोगमुक्त राख्न सहयोग गर्छ ।
५. ऋषिमुनीहरु मह सेवन गर्थे । महले प्राकृतिक एन्टिबायोटिकको काम गर्छ ।
६. ऋषिमुनीहरुका आफ्नो आश्रममा गाई पाल्थे । गाईको दुध सेवन गर्थे । दुध क्याल्सियमको राम्रो स्रोत हो । यसले हड्डीलाई बलियो बनाउँछ ।
७. ऋषिमुनीहरु दहीलाई खानामा सामेल गर्थे । यसले पाचन यन्त्रलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्छ ।
८. ऋषिमुनीहरुका हरियो सागपात प्रयोग गर्थे । यसले भिटामिन र मिनरल्सका साथै फाइबर प्राप्त हुन्छ ।